एनआईसी एशिया बैंकको नयाँ शाखा रुपन्देहीको कोटिहवामा
ARCHIVE, CORPORATE » एनआईसी एशिया बैंकको नयाँ शाखा रुपन्देहीको कोटिहवामा
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले तिलोत्तमा न.पा. वडा नं. १५, कोटिहवा, रुपन्देहीमा नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको छ । सोमबार (माघ २९ गते) एक समारोहका बिच नेपाल राष्ट्र बैंक, भैरहवाका निर्देशक अशोक कुमार पौडेलले कोटिहवा शाखाको विधिवत् उद्घाटन गरे ।
शाखा सञ्जाल, पूँजी संरचना, वासलातको आकार, ग्राहक संख्याहरुको आधारमा निजी क्षेत्रको अग्रणी बैंकहरुमध्ये एक मानिने एनआईसी एशिया बैंकको शाखा संख्या १७३ पुगेको छ । यसबाहेक बैंकले आफ्ना १७२ एटिएम एवंम् ४ एक्स्टेन्सन काउन्टरहरुबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
प्रकाशित : Tuesday, February 13, 2018